Guddoomiyaha WADDANI Oo Boorama Kulan Kula Qaatay Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali | Araweelo News Network
Guddoomiyaha WADDANI Oo Boorama Kulan Kula Qaatay Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali
Kulan qado ah oo Boorama ay ku yeesheen Guddoomiye Cirro iyo Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali
Kulan qaddo ah oo si heer sare ah loo soo agaasimay, ayaa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobalka Awdal guddoomiyaha golaha Wakiilada Somaliland, isla markaana ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI Cabdiraxmaan M. Cabdillaahi (Cirro) iyo madaxweyne xigeenkii hore ee Somaliland Muj. Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax.
Kulanka casuumada qadada ah oo aan la sheegin cida soo abaabushay, ayaa lagu sheegay ujeedkiisu inuu ahaa mid is-xog-waraysi ah, kaasoo ka dhacay hotel Rays ee Boorama, waxaana sidoo kale ka qeyb-galay xubno ka mid ah hoggaanka, guddida fulinta, garabyada dhallinyarada iyo haweenka iyo weliba sida oo kale siyaasiyiin, wax-garad, aqoon-yahan iyo madax-dhaqameed ka soo jeeda gobalka Awdal.
Siyaasiyiin iyo madax-dhaqameedka kasoo jeeda gobalka Awdal oo ugu horeyn kulankaas ka hadlay, ayaa sheegay inay guddoomiye Cirro iyo weftigiisa kusoo dhawaynayaan magaalada Boorama, waxaana ay tibaaxeen sida ay diyaarka ugu yihiin in isbedel dhab ahi siddii uu uga qabsoomi lahaa guud ahaan dalka, iyaga oo carabka ku dhuftay inay diyaar u yihiin wixii taageero ah ee ay kula barbar istaagayaan xisbiga WADDANI.
Madaxweynahii xigeenkii hore ee Somaliland Muj. Cabdiraxmaan aw-Cali Faarax oo isna halkaas ka hadlay, ayaa dhankiisa soo dhaweeyey weftiga uu hoggaaminaayo guddoomiye Cirro, isaga oo ku dheeraaday xidhiidhka ay lee yihiin isaga iyo guddoomiyaha xisbiga WADDANI, waxaana uu tilmaamay in guddoomiye Cirro uu yahay hoggaamiyeyaasha ugu mudan ee ay rajo ka qabbaan in uu qaranka hoggaamiyo, isaga oo ku ammaanay in uu yahay in dhowrsoon oo siyaasaddiisa ay ku ladhan tahay degganaasho iyo lexlo-jeclo badan oo uu qaranka ka leeyahay.
Guddoomiyaha xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan M.Cabdillaahi (Cirro), oo isna halkaas ka hadlay, ayaa sheegay in ay farxad-weyn u tahay in maanta ay kulan qado wada qaataan madaxweynahii hore ee Somaliland Muj. Cabdiraxmaan aw-Cali Faarax, isaga oo sheegay in kulankani ku ee kaa is-xogwaraysi ku saabsan siddii looggu wada diyaar garoobi lahaa wacyi-gelinta diiwaan-gelinta Somaliland, isla mar ahaantaana ay u wada diyaar garoobayaan siddii loogga shaqeyn lahaa wacyi-gelinta diiwaan-gelinta codbixiyeyaasha Doorashooyinka.